Igumbi le studio ye-EUROLUX kwisitayile se "LONDON".
UJulia unezimvo eziyi-38 zezinye iindawo.
Ndicebisa ukuba ndihlale kwindlu entsha, epholileyo yesitudiyo kwisitayile se "LONDON" kweyona ndlu inobunewunewu - indawo entsha yokuhlala "Idolophu etyebileyo" kwisixeko sase-Irpin, kwingingqi yaseKiev.
Sinayo yonke into yokuhlala kwakho kamnandi kwaye siya kukuphatha ngeti yokwenyani yesiNgesi!
Kufutshane kukho iivenkile, iibhari, iikhefi kunye neeresityu, amahlathi kunye neepaki.
Kufutshane nesakhiwo kukho indawo yokumisa i-minibus kwisikhululo semetro sase-Akademgorodok ngemizuzu engama-30, kwaye yimizuzu eli-15 kuphela ngemoto.
Sihlala sivuya ukubona iindwendwe! Zonke iifoto zethu ziyinyani.
I-studio ye-studio enesitayile ebekwe kumgangatho woku-1 wesakhiwo esitsha. Umoya opholileyo kunye nokukhanya, umoya omtsha kunye nococekileyo ngenxa yemithi yepine kunye namachibi angekho kude nendlu. Ivaliwe indawo edibanayo.
Ukuhamba ngomzuzu we-15 ukusuka kwindlu yiYunivesithi yeSizwe yeNkonzo yeRhafu kaRhulumente, iipaki ezininzi, i-cinema. Umbindi wesixeko yimizuzu eyi-10 ngeenyawo.
Kwimizuzu emi-2-5 ukuhamba kukho i-cafe, i-cafeteria, i-pizza, i-salon yobuhle, ikhemesti, i-bath complex, ikliniki yabucala, izitolo zokutya "Fora", "ATB", ivenkile yempahla.
Umphathi wam uRoman uhlala enxibelelana neendwendwe kuyo nayiphi na imibuzo yeendwendwe.